कांग्रेससँग बदला लियो सरकारले, भारतका लागि राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय
काठमाण्डौ । चीनको भरपर्दो साथ पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्नलाई बनाएको योजना असफल पारी त्यसको बदला लिन कस्सिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुको समेत साथ पाएपछि उनले सरकार ढाल्ने गोप्य डिजाइन बनाउन सहयोग गरेको, सरकारलाई असहयोग गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयबिना मनपरी...
भारतीय डिजाइन फेल भएपछि कृष्ण महरालाई जेल जानुपर्ने चिन्ता !
काठमाण्डौ । भारतीय डिजाइनमा सरकार गिराउन भएको सम्पूर्ण तयारी एकरातमै फेल भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अझै केही महिना टिक्ने निश्चित भएको छ । भारतीय डिजाइनलाई असफल पारेपछि ओली त खुशी छन् नै प्रचण्ड पनि बजेट प्रस्तुतीपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाइने अवसरका कारण कम खुशी छैनन् । एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र सत्तासीन अन्य दलका नेताहरु भारतीय...
ओली सरकारमाथिको कालो बादल फाट्यो, फेरि एमालेसँगै हिँड्न माओवादी सहमत
काठमाण्डौ । भारतीय डिजाइनमा कांग्रेससँग मिलेर सत्ताको नेतृत्व गर्न खुट्टा उचालिसकेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्रकै देशभक्तहरुले रोकेका छन् । उनीहरुको प्रयासका कारण ओली नेतृत्वको सरकारमाथि मडारिएको संकटको कालो बादल तत्कालका लागि टरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक प्रमोद दाहालका अनुसार एमाले नेता...
ओली सरकार गिराउने खेलको नालीबेली, नयाँ सरकार बनाउन ज्ञानेन्द्रसम्मलाई प्रयोग !
काठमाण्डौ । सत्ता साझेदार एमाओवादीको बुधबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय गर्दै त्यसमा सामेल हुन सबै दललाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । भाषामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको भनिए पनि यसको अन्तर्य चाहि अर्कै छ । एमाओवादीले २ वर्षसम्म ओलीलाई साथ...
२ महिनामा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटले लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार परिणाम देखिने गरी काम गर्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित ‘चालु आवको बजेट कार्यक्रमको प्रगति तथा कार्यान्वयका चुनौती’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी दुई महिनाभित्र...
तेश्रोपटक नेपाल आउँदै मोदी, एक तीरबाट दुई शिकार गर्ने दाउ
काठमाण्डौ । लुम्बिनी र जनकपुर जान नपाएको झोंकमा नेपालमा ५ महिनासम्म नाकाबन्दी गरेपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने ध्याउन्नमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लागिपरेका खुलासा भएको छ । नाकाबन्दी, त्यसपछि नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उनले गर्दै हिँडेको मोर्चाबन्दीका कारण नरेन्द्र मोदीको नेपालसँगको सम्बन्ध निकै चिसिएको...
चौबीसघण्टाका लागि किन गए पूर्वराजा दिल्ली ?
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दिल्ली यात्रा सकेर फर्किएलगत्तै ‘अर्जेन्ट बोलावट भयो भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बिहीबार दिल्लीतर्फ उडेका छन् । पूर्व राजाको पारिवारिक स्रोतका अनुसार दिल्लीबाट ज्ञानेन्द्र शाहलाई आकस्मिक बोलावट भएको हो । आकस्मिक रुपमा दिल्लीतर्फ पूर्व राजा उड्नुलाई निकै अर्थपूर्ण...
यस्तो खिचडी पकाउँदैछ दिल्ली, जेठभित्रै ओली सरकार गिराउने सेटिङ !
काठमाण्डौ । निकै शानदार मत पाई पार्टी सभापति र दुई तिहाई मतका साथ संसदीय दलको नेतामा जित हासिल गरेपछि पत्नी आरजू राणाको उपचारको बाहानामा दिल्ली गएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, केही नेपाली नेता र भारतीय एजेन्सीका प्रतिनिधिहरुबीच ओली सरकार गिराउने उद्देश्यले रणनीति बनाउन गोप्य छलफल राखिएको खुलासा भएको छ । अबको...
आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीको खुलासा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विशेष योजना आउने
बुटवल । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आयात र निर्यातको असन्तुलन रोक्ने, भूकम्पले भत्काएका संरचना निर्माण र सवल अर्थतन्त्रकेन्द्रित हुने बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले संविधानको कार्यान्वयनलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिइने बताउँदै संविधानले मार्गदर्शन गरेका प्रमुख विषय र प्राकृतिक बिपत्ति (भूकम्प) र...
लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पुत्रमोह, वाणिज्यमन्त्रीमा जयन्त
काठमाण्डौ । राप्रपाको सिफारिस बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त चन्दलाई आइतबार वाणिज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् नेपालमा मन्त्री हुनलाई नेताको आफन्त, नातेदार नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई फेरि एकपटक स्थापित गर्दै अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दले आफ्ना जेठा छोरा जयन्त चन्दलाई श्रम तथा...
सुशील कोइरालाको शंकास्पद मृत्युलाई दबाइएको वर्ष
काठमाण्डौ । गम्भीर बिरामी परेका खबर पनि नसुनिएको, हिँड्न, डूल्नसक्ने अवस्थाका कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अप्रत्यासित र रहस्यमय निधनले २०७२ लाई खल्लो बनायो । कोइरालाको निधनको बिषयमा उनका निजी चिकित्सक, उनीसँगै बस्ने भाञ्जा लगायतका आफन्तहरुको आपसमै बाझिने बयान, त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै निजी चिकित्सकले...
ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै के भने ? (पूर्णपाठ)
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रमम उनले तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र सम्वादमा आउन आहृवान गरे। नयाँ वर्ष २०७३ को पूर्वसध्यामा मंगलबार साँझ देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘‘सम्वादमा आउनुस् । लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै पनि विषय छैन...
यसरी बन्दैछिन सुशीला कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश
काठमाण्डौ । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नयाँ कीर्तिमान राखेकी छिन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतकोे इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अहोभाग्य सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीश कार्कीलाई प्राप्त भएको हो । संवैधानिक परिषद्को आज साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा...
भारतको सरकारी टिभीमा ओलीको बोली–‘म कसैको हजुरआमासित मेरो प्रेम थियो किन भनूँ ?’ (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको सरकारी च्यानल ‘राज्यसभा टेलिभिजन’लाई तीन साताअघि दिएको एक अन्तर्वार्ता एकाएक चर्चामा आएको छ । टेलिभिजनका पत्रकार अखिलेश सुमनले तीन साताअघि लिएको र मार्च २० मा प्रसारण भएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त ओलीको चोटिला जवाफका कारण ढिलै भए पनि सो अन्तर्वार्ता एकाएक चर्चामा आएको हो । आखिर ओलीले...
अन्ततः पौडेलको पोल्टामा फेरि पराजय
काठमाण्डौ । १७ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा हारेर सबैभन्दा धेरै हार्ने नेताको इतिहास बनाएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकपछि अर्को गर्दै दुईवटा ठूला हार व्यहोर्नुपरेको छ । नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा शेरबहादुर देउवासँग फराकिलो अन्तरले शर्मनाक हार व्यवहोरेका पौडेलले पार्टीको संसदीय दलको...